फेसबुकलाई झट्का, पेपल बाहिरियो | Kendrabindu Nepal Online News
फेसबुकलाई झट्का, पेपल बाहिरियो
१९ आश्विन २०७६, आईतवार ०७:३७
एजेन्सी । फेसबुकलाई ठूलो झट्का लागेको छ । अमेरिकाको निकै लोकप्रिय अनलाइन भुक्तानी कम्पनी पेपल होल्डिङ्सले फेसबुकको अग्रसरतामा गठन भएको लिब्रा एसोसिएसनबाट बाहिरिने घोषणा गरेसँगै फेसबुकलाई झट्का लागेको हो ।
फेसबुकको अग्रसरतामा रहेको डिजिटल मुद्रा परियोजनाका २८ वटा सदस्यमध्ये पेपल एक थियो। पेपलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वव्यापी यस क्रिप्टोकरेन्सी क्लबबाट बाहिरिने घोषणा गरेको थियो ।
यस क्लबमा भिसा, उबर, लिफ्ट र मास्टरकार्ड समेतका कम्पनीहरु सदस्य छन्। अमेरिकाको सान जोजेमा मुख्यालय रहेको पेपलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कम्पनीले हालकै संरचना र विधिबाट बढीभन्दा बढी प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित र भरपर्दो सेवा प्रवाह गर्ने जनाएको छ।
गत जुन २०१९ मा औपचारिक रुपमा घोषणा गरिएको लिब्राबाट संस्थापक सदस्य बाहिरिएको यो पहिलो कम्पनी हो। अरु सदस्यको साझेदारीमा आगामी सन् २०२० को जुनमा लिब्रालाई प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरिएको थियो।
तर पेपलले फेसबुकसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। लिब्राको सदस्यबाट भिसा र मास्टरकार्ड समेतका अरु कम्पनीले पनि संस्थापक सदस्य त्याग्न लागेको खबर बाहिरिएको थियो ।
facebook, पेपल, फेसबुक
Prevपूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको दसैं शुभकामनाः राजनीतिक दललाई व्यंग
आजदेखि यी रुटमा चल्दैछ प्रहरीको निःशुल्क बसNext
किन हटायो फेसबुकले राष्ट्रपति ट्रम्पको भिडियो सामग्री ?
फेसबुकद्वारा फोटो र भिडियो सङ्ग्रह सम्वन्धी नयाँ सुविधा थप
‘सिस्टमभित्र रहेर सामाजिक सञ्जालमा कारोबार गर्न सकिन्छ’ -डा. गुणाकर भट्ट
अब नेपाली बैंकहरूबाट मात्रै सामाजिक सञ्जालमा कारोबार गर्न पाइने